Margarekha साउनमा किन माछामासु नखाने, किन उपवास बस्ने ? यस बर्षको विशेष साउन – Margarekha
साउनमा किन माछामासु नखाने, किन उपवास बस्ने ? यस बर्षको विशेष साउन
अबको तिन दिनपछि साउन महिना सुरु हुँदैछ । साउन महिना, धार्मिक आस्था राख्नेहरुका लागि विशेष महिना । यो महिनामा केही धार्मिक पर्वहरु पनि पर्छ । यो साउने संक्रान्तिको महिना हो । यो बोलबमको महिना हो । भगवान शिवको आरधानाको महिना हो । उपवासको महिना हो ।
यस पटक साउन महिना चार सोमबारको व्रत हुनेछ । पहिलो साउनको सोमवार ३० जुलाईको हुनेछ ।अनलाइनखबरबाट
३० असार २०७५, शनिबार ०६:४४ प्रकाशित